တိုက်တွန်းချင်သော ရှုခင်းဆောင်းပါး ZEKKEI Japan(1/5)
နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်းပါးစာရင်း ( အညွှန်း )
ဦးတည်ရာမရှိလမ်းလျှောက်မယ်။ ပန်းသီးရောင်လမ်း ( ဟီရိုးစခိ ) ၆ နေရာ ပျော်စရာနည်းလမ်း
ရှင်းအာအိုးမိုရိဘူတာမှ ဇိုင်းရိုင်းလိုင်းဖြင့် ၃၀ မိနစ်ခန့် ။ ပန်းသီးထွက်ရှိနှုန်းပမာဏ ဂျပန် နံပါတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ အာအိုးမိုရိခရိုင် ( ဟီရိုးစခိမြို့ ) ။ မြို့ကို လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် တွေ့ ရမယ့် ပန်းသီး ...
ဒီလိုနေရာမှာ ဘုရားကြီးက ? အာအိချိခရိုင်ရဲ့ အလွန်ထူးခြားပြီး အရမ်းကြီးမားတဲ့ ဘုရားကြီး ၄ ဆူ
အံ့သြစွာဖြင့် မသိခဲ့တာက အာအိချိခရိုင်က ဂျပန်မှာ နံပါတ်တစ် ဘုရားကျောင်းတွေ များတဲ့ ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ခရိုင်တွင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ရုပ်ပွားတော်နဲ့ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကိ...
အိချိဂါဝမြို့မှာ ဒီလိုရှုခင်းမျိုးက ! ခရီးစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်မှာ အကြံပေးချင်တဲ့ နေရာ ၃ ခု
တိုကျိုမှာ ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးချိန် ၊ အချိန် လုံလုံလောက်လောက်ရှိတဲ့နောက် သင်ဘာလုပ်မလဲ ? ဈေးဝယ်ထွက်မှာလား ? ဒါမှမဟုတ် အစားလျှောက်စားမှာလား? ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပေမယ့် ဒေသခံတွေ အကြံပေးတဲ့ ပုန်းကွယ်နေ...
တိုကျို အာခိရုနိုမြို့မှာရှိတဲ့ ( မိုနဲရေကန် ) လိုမျိုး စိမ့်ရေကန် ၂ ခု
ပုံမှန်အတိုင်း ရှုခင်းတွေ ရှာဖွေနေတာက အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စာရေးသူက ဒီတစ်ကြိမ် ( အမှန်တကယ်က လျှို့ ဝှက်ထားချင်တဲ့ တိုကျိုရဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ရှုခင်းနေရာ ) ကို အားလုံးအတွက် မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ မိတ်ဆက်ပေးမယ့်နေရ...
နှစ်တစ်နှစ်ကို အဆုံးသတ်ဖို့! ဒီဇင်ဘာလမှာ မြင်ချင်တဲ့ ရှုခင်း ၇ ခု လက်ရွေးစင်
ချမ်းအေးမှုက ပြောင်းလဲမြင့်တက်လာတဲ့ ဒီဇင်ဘာလ။ ကြည်လင်သန့် စင်တဲ့ လေထုထဲမှာ နွေးထွေးစွာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ မီးအလင်းရောင် နဲ့ တဖျတ်ဖျတ်လင်းနေတဲ့ မီးထွန်းအလှဆင်ခြင်း စတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ရှုခင်းကို မြင်တေ...
အနည်းငယ် ဆောင်းဦးရောက်ခဲ့ပြီ ! နိုဝင်ဘာလမှာ သွားချင်တဲ့ ရှုခင်းနေရာ ၇ ခု လက်ရွေးစင်
ခန်းတိုးဒေသကို အစပြုပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ မိုမိဂျိ အကောင်းဆုံးရာသီကို ကြိုဆိုတဲ့ နိုဝင်ဘာလ။ သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း သိသိသာသာ ဆောင်းဦးရဲ့ သင်္ကေတတွေကို ခံစားမိနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ အေးချမ်း...
လေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ် ! သဘာဝအလှတရားကို ကြည့်ရမယ့် ( ရှုခင်း ကောင်းကင်ကြိုးလိုင်း ) ၅ ခု လက်ရွေးစင်
တောတောင်တွေက မိုမိဂျိတွေဖြင့် လှလှပပရောင်ချယ်ထားတဲ့ ရာသီဥတုဖြစ်တယ်။ တောင်တက်ရင်း တောင်တက်လမ်းရဲ့ ရှုခင်းကို ခံစားရတာကောင်းပေမယ့် လေပေါ်မှ ကြီးမားတဲ့ ပန်နိုရားမားရှုခင်းကို ငုံ့ ကြည့်ရတာလည်း စည်းစိမ်...
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟာ ဘာလုပ်တဲ့နေရာလဲ ? ခါနာဇာဝ ( ဟိဂရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မြို့ ) ရဲ့ ထူခြားတဲ့ ကမ္ဘာလေးဆိုတာ ?
အဲဒိုခေတ်မှ သမိုင်းကြောင်းတွေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျန်ရှိနေတဲ့ ခါနာဇာဝမြို့လေးဖြစ်တယ်။ ခါနာဇာဝရဲတိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရဲတိုက်မြို့လမ်းလေးက သာယာဝပြောပြီး စစ်ဘေးဒဏ် နဲ့ ငလျှင်ဘေးဒဏ်တွေ မခံရဘဲ လက်ရှိခေတ...